Okufanele ukwenze ngemuva kokufaka i-Elementary OS 0.2 Luna | Kusuka kuLinux
U-IvanLinux | | Ukubukeka / Ukwenza ngezifiso
Ngiyabona ukuthi okuthunyelwe kwami ​​kokuqala kwamukelwe kahle kakhulu, ngizozama ukuqhubeka nokuthumela izinto eziwusizo nokunye okuhlekisayo ... Ngiyazi ukuthi sekwephuzile kodwa ngikulethela izeluleko ze-Elementary OS 🙂
5 5. Faka izicelo zokucindezelwa
6 6. Faka ezinye izimenenja ze-package nezokumisa
7 7. Thola ezinye izinhlelo zokusebenza ku-Software Center
8 I-8 Ukwenza ngokwezifiso
Kungenzeka ukuthi ngemuva kokukhishwa Okuyisisekelo OS Luna izibuyekezo ezintsha zivele kumaphakeji ahlukahlukene isithombe se-ISO esisatshalaliswa yithimba le-Elementary eza nawo.
Ngalesi sizathu, ngemuva kokuqeda ukufakwa kuhlale kunconywa ukusebenzisa indlela ye- Buyekeza iMenenja noma ngokusebenzisa okulandelayo kusuka ku-terminal:
Ukufinyelela ku- Ukuxhaswa Kwezilimi kusuka kuzilungiselelo zesistimu futhi ukusuka lapho uzokwazi ukwengeza ulimi oluthandayo.
Ngenxa yezinkinga zomthetho, i-Elementary OS ayikwazi ukufaka ngokuzenzakalela uchungechunge lwamaphakeji, ngakolunye uhlangothi, adingeka kakhulu kunoma yimuphi umsebenzisi: ama-codec wokudlala i-MP3, i-WMV noma ama-DVD abethelwe, amafonti angeziwe (asetshenziswa kakhulu kwiWindows), i-Flash abashayeli abaphethe (ukusebenzisa kangcono imisebenzi ye-3D noma i-Wi-Fi), njll.
Ngenhlanhla, isifaki se-Elementary OS sikuvumela ukuthi ufake konke lokhu kusuka ekuqaleni. Kumele unike amandla leyo nketho kwesinye sezikrini zesifaki.
Uma Ubuntu ingalitholi ikhadi lakho, ungahlala ufaka umshayeli wakho we-3D (nvidia noma ati) ngokubheka i-Hardware Configuration Tool.
Amanye amakhadi emidwebo ye-ATI ngeke asebenze ne-Elementary OS ngaphandle kokuthi usebenzise abashayeli be- “legacy” be-ATI futhi wehlise iseva ye-X. Uma kudingeka, uzosheshe uthole ukuthi kungani i-Elementary OS ingeke ivuleke kahle. Ukuyilungisa, sebenzisa imiyalo elandelayo:
Uma ungomunye walabo abangakwazi ukuhlala ngaphandle kokulalela ama-MP3, M4A namanye amafomethi okuphathelene, futhi ubungeke uphile kuleli zwe elinonya ngaphandle kokukwazi ukudlala amavidiyo akho kuma-MP4, WMV nakwamanye amafomethi okuphathelene, kukhona Isixazululo esilula:
I-GetDeb (phambilini eyi-Ubuntu Click And Run) iyiwebhusayithi lapho amaphakheji we-Deb nezinye izinhlobo zamanje zamaphakeji ezingangeni ezinqolobaneni ezijwayelekile zenziwa futhi zenziwe zitholakale kumsebenzisi wokugcina.
I-Playdeb, indawo yokugcina umdlalo ye-Ubuntu / Elemntary OS, yenziwe ngabantu abafanayo abasinike i-getdeb.net, inhloso yephrojekthi ukunikeza abasebenzisi be-Ubuntu indawo yokugcina engekho emthethweni ngezinguqulo zakamuva zemidlalo.
5. Faka izicelo zokucindezelwa
6. Faka ezinye izimenenja ze-package nezokumisa
Ukufakwa: Sesha Isikhungo Sesoftware: I-Synaptic. Ngaphandle kwalokho, ungafaka umyalo olandelayo ku-terminal ...
Akudingekile ngoba singahlala sisebenzisa umyalo othi "apt-get", kepha nakhu ngikushiyela labo abafisa:
7. Thola ezinye izinhlelo zokusebenza ku-Software Center
Uma kwenzeka ungatholi uhlelo lokwenza okufunayo noma ungazithandi izinhlelo zokusebenza eziza ngokuzenzakalela, ungaya kwiSoftware Center.
Firefox, isiphequluli sewebhu (angincomi i-Chromium noma i-Google Chrome)
LibreOffice, I-Office suite (i-MS Office kodwa mahhala)
I-8 Ukwenza ngokwezifiso
Faka i-Elementary Update Community PPA
Ama-Elementary Tweaks ngamafuphi yilokho ongakwenza ngokwezifiso kakhulu nge-Elementary
Isiqalisi esiwusizo kakhulu! Ifake ngeke uzisole 😉
Faka izingqikithi, izithonjana njll.
Ukwenza ngokwezifiso okuthuthukile, umphumela wewindi onjenge-jelly
Uma ufuna ungakwazi ukweqa lokhu noma uzame kancane bese ukukwenza 😉
Ake siqale 😀
Uma sesifakiwe sivala iseshini bese sichofoza ku-nut bese ukhetha i-Xfce Session bese uqala isikhathi.
Siqala ngamasethingi azenzakalelayo (Yima isikhonzi esincane kanye ne-xfce xD)
Manje sifaka kwin:
Futhi uma ufuna ungafaka iDolphin ne-Ark (Kunconyiwe):
Sifaka ukumiswa nokulungiselelwa ku-Session and Startup kuthebhu ye-autostart yohlelo lokusebenza
Futhi sifaka izicelo ezilandelayo:
Siyavala bese singena.
Futhi uhlobise ngokuthanda kwethu:
Ukushintsha izinketho ze-kwin:
yayinjalo-ke eyami 😛
Leli ithanga lami:
I-GPU: I-Intel Corporation processor Atom D4xx / D5xx / N4xx / N5xx Integrated Graphics Isilawuli (rev 02)
Amathiphu we-Elementary: http://www.elementaryupdate.com/ (isiNgisi)
Ngiyethemba uyithandile, ungakhohlwa ukungilandela ku-twitter, uthanda, ubeke amazwana futhi ubhalise i-xD...
Faka lapha bese ukale engikuthumele: http://strawpoll.me/703848
Indlela ephelele ye-athikili: Kusuka kuLinux » Ukubukeka / Ukwenza ngezifiso » Okufanele ukwenze ngemuva kokufaka i-Elementary OS 0.2 Luna
Kungani kubonakala ngathi ikhophi nokunamathisela okufanele ukwenze ngemuva kokufaka ubuntu 12.04?
Isihloko kungaba ikhophi-unamathisela, kepha okuqukethwe, hhayi.
I-ElementaryOS iyi-distro enhle, eshesha kakhulu nenhle
Ngokwami, kubumbene nje Ubuntu futhi akukho okunye! : /
Ngiyesaba ukuthi unephutha ngokuphelele, phambilini ngisebenzise Ubuntu (ngayeka ukukusebenzisa ngokuqinisekile enguqulweni engu-12.04, ngemuva kokuphoxeka kobunye, noma kunjalo, umuntu akayishadi indawo, ngafaka abanye) kwase kufanele sebenzisa ithanga ngokusebenza okuncane, kwangimangaza ukuthi Ubuntu ezindaweni ezahlukahlukene bebehamba kancane (ubunye bunqotshwe ngokuningi okucacile), ukumangala kwami ​​lapho ukufaka ama-eos bekuyindawo ezinzile futhi esheshayo, kungasaphathwa ukuthi i-pantheon yinhle kakhulu kunobunye be-gnome ne-kde al ngenkathi kugcinwa ubulula obusebenziseka kalula.
Ingabe ungumlandeli we-iCarly noma omunye umkhiqizo weDan Schnneider? Ngoba njalo, kuleyo mibukiso ukuthi banikela ngoNick, bafaka ama-apula esikhundleni samapheya.
Cha, okokuqala, angazi ukuthi yini iCarly noma uDan, empeleni kungukuphawula okuyinjongo yize kungabonakali njengokufana nakho, ngoba sengivele ngivivinye i-Elementary OS Luna, ekuboneni kokuqala ngahlabeka umxhwele kepha lapho ngibona ukuthi yini ibisuselwa ku-kernel (ephelelwe yisikhathi ngokweqile) kushiye kwaba yilokho ebengicabanga ukuthi bekuzama ukuba yikho, ukuze kube "okuvulekile nokusetshenziswayo." Ngaphezu kwalokho, lokho nokuba yikhophi kwe-mac ngendlela yobuzenzisi njengo-Unity, uma i-Unity ikopisha imiqondo ye-Mac njenge-Dock, ukuthi ngokuyibeka ngakwesobunxele futhi iguqule ukubukeka icasha kahle, kepha umqondo uqobo, njll, njll. Uma i-Elementary yangihlaba umxhwele, ngoba kimi i-Pear yasungulwa, futhi ngendlela eqondile njengoba iMacOSX isebenza, akuyona iMac, ngiyazi, kepha ukusetshenziswa kuyikho okubalulekile, ngoba i-OSX ingumklamo omuhle, ngokwesibonelo iLaunchpad noma ukudalula, ebengingazi ukuthi bekuyini futhi ngenxa kaPear sengiyazi manje, futhi zibalulekile, futhi angazi nakancane. Ngaphambi kokuthi ngifuna ideskithophu ukuze ngikwazi ukushumayela i-Linux ngaphandle kokungenza ngibe namahloni (ekuziphatheni kwe-GUI) ngoba sengivele ngiyitholile.
Manje, amaStallmantos, ama-Open Source Puritans, ama-troll, njll. Azongishaya entanyeni yami. njll. Awu, ungazihluphi, angizukuphendula. Uma laba bahlanzayo bengenalutho, kuyinkululeko, yebo, kuyindida kepha kuyiqiniso, bese abanye mabakhethe, bashiye intukuthelo lapho bengathandi okuthile, vumela Ubuntu benze imisebenzi yabo. Futhi ekugcineni kungaba kuhle uma i-Elementary ijoyine ngePear, iLibre Office ne-Open Office, njll. njll. kanye nokunye okude. esikhundleni se "imfoloko", "hlanganisa", "hlanganisa", "hlanganisa"….
Yebo, i-pearOS ayisekho ...
Kulungile, i-eOS inesoftware ephelelwe yisikhathi, kepha kuLinux akuyona inkinga enkulu leyo, ikakhulukazi engihlala ngikwenza lapho ngifaka i-eos ukuvuselela i-kernel enguqulweni yamanje, kanti leyo esuselwe ku-Ubuntu 12.04 LTS iyinzuzo enkulu ngoba ukwethula izibuyekezo ngaphandle kokufometha ukufaka izinhlobo ezintsha.
Ungafaki ama-amd proprietary driver, ngeke asebenze kahle nge-gala, yisiphazamisi futhi sibucayi.
Njengoba eseshilo umfowethu UStallman:
Musa ukuthenga ku-ATI.
UMfoweth 'uStallman angakutshela izinto ezimbi kakhulu nge-nvidia XD, uma kukhona, angathi thenga i-intel lol
Njengoba ngikwazi ukuthenga ilaptop yeLeemote lapho-ke kuzofanele ngithembele ku-Intel chipset (i-NVIDIA iyabiza futhi ngincamela ukuzuza kakhulu kwimidwebo ye-processor kanye nemidwebo ye-Intel).
I-PS: Thenga amabhodi weGigabyte, hhayi amaFoxconn.
IGigabyte, Asus noma i-Asrock.
Labo bathathu abakaze bangihlule (ngisho amamodeli anezakhiwo ze-AMD).
NjengoStallman ukusho lokho !!!!!!! ngiyabonga unkulunkulu ngiyabonga sengivele nginesizathu esivumelekile sokumbulala.
Kepha ungasebenzisa i-Kwin 😉
Angifuni ukuba yiphathi pooper, kepha usebenzisa i-Iceweasel ESR? I-Version 25 (branch release) isebenza njengentelezi. Ngento yehluzo ye-ATI / AMD, nginezinkumbulo ezimbi kakhulu ngenkathi ngisebenzisa iWindows XP nekhadi levidiyo le-ATI lisha.
Nge-KDE, ekugcineni ngithole ukuthula kwami ​​kwe-desktop-hopping. I-XFCE ilusizo njenge-KDE, kepha bengizoyisebenzisela ama-PC anekhadi lemidwebo elingeke lisebenze ngisho nokudlala iHalf-Life 1.
Futhi ngasendleleni, ngiyabonga ngokuthatha isikhathi sokwenza i-Elementary QT yakho. Ake sibheke ukuthi ngingenza i-Elementary KDE.
Izifiso zakho ama-oda xDD
Ngizokwakha okuthunyelwe okuzokwenziwa: Elementary OS KDE
Uma kuyi-Iceweasel, sengikhathele ukuthumela idatha ku-Mozilla xD (ngisanda kusebenzisa i-Debian futhi ngathandana ne-Iceweasel)
Mina, u-Iceweasel kwakuwuthando ekuqaleni kokubona. I-Iceweasel iba yiFirefox engangihlale ngiyiphupha, futhi inginika ukuthula kwengqondo maqondana nedatha yami.
Igatsha lokukhululwa lithuthuke kakhulu ngokuya ngokuhambisana nama-plugins weFirefox, ngakho-ke lenza izimanga.
Uma beshicilela okuthunyelwe okubuyekeziwe (okwami), kuzokumangaza wena ne-KDE 😉 yakho
Yebo i-Elementary KDE yami isese-beta. Okwamanje, kusesigabeni sokucwebezelisa.
Ngabe ukhona ongancoma i-distro enokuxhaswa okuhle kwe-amd, ngine-HD8470 ikhadi elihlanganisiwe futhi ne-ubuntu 12.04.4 lts ayiqali uhlelo lapho ibuyekeza i-kernel ..
IManjaro ende i-kernel 3.12 esitebeleni okuthiwa siletha ukuthuthuka kwe-amd, i-kernel ifakwa ngomyalo olula bese ukhetha ukuthi iyiphi i-kernel ozoqala ngayo.
i-kernel indala kakhulu, ekhadini lakho, kuzofanele usebenzise ubuntu 13.10, nge-3.11.
Siyabonga ngemininingwane pandev nejomada
Futhi i-Elementary OS akufanele ngabe eyabasebenzisi be-novice computing? Kungani umsebenzisi we-novice kufanele asebenzise yonke leyo miyalo?
Angiboni ukuthi kunzima kanjani ukubhala imiyalo embalwa 😉
Angibonanga ukuthi noma yikuphi lapho kubhekiswa ku-Elementary njenge-distro yamakhompiyutha ama-computer, mhlawumbe ama-newbies kuleli zwe le-GNU / Linux yebo.
Kepha ngama-computer novices angicabangi ukuthi kukhona i-distro futhi awudingi ukuya kude kakhulu, muva nje benze i-athikili ku-muylinux ngokuthi kunzima kanjani kwabanye abantu ukuthola inkinobho yokulanda Ubuntu ekhasini labo.
Kokuhlangenwe nakho okushiywe yisibonisi sesitayela se-OSX Kepha uma ufuna okuthile okunzima impela, ngincoma ukuthi ufunde ukwakha i-distro yakho ngeLinux Kusuka ekuqaleni noma usebenzise iGentoo.
Yikho kanye engikuthandayo ngeLinux, kufanele uchithe isikhathi ufaka izinhlelo eziningi, eziningi zazo okungenzeka ukuthi sezivele zifakiwe.
Iqiniso ukuthi i-ElementaryOS isivele ilungele ukusetshenziswa. Lokhu okuza kamuva uma ufuna ...
@elav Uqinisile, kepha kungani ufake ezinye izinhlelo ezingeke zibe wusizo kuwo wonke umuntu futhi ezizokwandisa isisindo se-OS? Ngicabanga ukuthi uMnu @pedro unendlela engafanele yokucabanga nge-GNU / Linux, akunjalo?
Ngiyabonga ngokuphawula ngeposi lami elav!
Leyo nzondo isuselwa ekungazini kwakho nasekungazini (njengayo yonke inzondo). Uma ngifuna okuthile nakho konke okudingayo, landa i-openSUSE, yiDVD ephelele (4.7) oyifaka ngokuphelele futhi ngiyangabaza ukuthi kukhona okushodayo.
@ Staff Ha ukuthi ngiqonde isisindo «4.7» GB ezimbalwa, akunjalo? i-xD
Siyabonga ngokuphawula ngokuthunyelwe kwami ​​kwabasebenzi!
I-Debian DVD1, plz!
Noma iDebian Wheezy DVD1. Akukho okungcono kunalokho.
Meh, uma ungafuni i-After Install enjengaleyo, kungcono ngiphakamise ukuthi ufake i-Russian Fedora Remix, okuyimfoloko yeFedora ongadingi ukuyenza ngemuva kokufaka.
Lol, emafasiteleni kuyefana, ukuthi uma i-vlc, uma i-itunes, ukuthi uma i-microsoft office, ukuthi uma ama-codecs e-so and pascual, uma i-antivirus ...
Ngenhlanhla i-antivirus ku-linux hhayi ee
Kuyafana, kuphela ukuthi kwiLinux iningi labo selivele lingene ekuphumuleni, ngaphandle kokubheka phakathi kweSoftonic ne-shit yalolo hlobo.
Lapho nginewindows ne-linux, ngiphuthelwe ukuphela kwe-xD
Ukubingelela nokubonga ngokuphawula ikhukhi!
Akukho okungcono kune-ukuphela. Ngisho ne-Windows command Prompt ayisondeli ezithendeni zakho.
Phakathi kwezintaba ze-Softonic ne-repo esemthethweni, ngincika ngasezikhundleni.
Kudala ngisebenzisa i-OS eyisisekelo kodwa ngiba nezinkinga ezithile lapho ngisebenzisa i-laptop yami inqanyuliwe kushaja, iba engazinzile futhi ihamba kancane futhi mhlawumbe kungenxa yokuthi ibhethri selindala futhi alinikezi ukusebenza okuhle.
Ngicabanga ukuthenga i-laptop entsha, ngingathanda ukuthi ibe ne-11.6 3 screen ne-i5 noma iXNUMX processor. Iyiphi oyincomayo ???
Mhlawumbe lo mbuzo awuhlangene kakhulu nendaba yendatshana kepha njengoba eminye imiyalezo ikhuluma ngoLemote nange-hardware, yingakho nginqume ukukwenza.
Phendula ku- [Acme]
Uzamile ukufaka i-jupiter? ngakho-ke okungenani uzokwazi ukuthi ngabe iprosesa lakho liku-100, kahle, kunokuba ulilungiselele ukonga ibhethri noma ukukhulisa ukusebenza.
I-Elementary OS yi-distro engiyithande kakhulu kuze kube manje. Kuza kuphela ne-elemental, bese unquma ukuthi uzokubeka ini kuyo. Ukubukeka kuyamangalisa, ngokwami ​​angisiboni isidingo sokubeka enye indawo ebonakalayo.
Ngenze cishe yonke into ngesikhungo sesoftware kusuka kulokho engikufundile ku- elementaryupdate.com, ngisebenzisa ithuba lokuthi bengifuna indlela yokubeka ukunciphisa nokukhulisa izinkinobho njengakwiWindows.
UMidori (kufakwe isiphequluli) uyindawo ethambekele osukwini nosuku, ngakho-ke ngafaka i-Chrome (lapho nginayo yonke idatha yami evumelanisiwe) .. kepha okuthunyelwe AKUKUNCOMI. Ngabe sikhona isizathu noma akukho okunye ngesifiso esihlanzekile osincoma iFirefox?
Ngoba ivela kwaGoogle ¬_¬ futhi ngubani owaziyo ukuthi iGoogle ingenzani, ngincoma kangcono i-Iceweasel
Noma i-Chromium (ngaphandle kokungena ngemvume nge-GMail yakho, kunjalo). I-Opera isivele ilahlile ukusekelwa kwayo kwe-GNU / Linux (inguqulo yamanje ayitholakali ngepenguin, ngakho-ke ngigcina i-Opera 12.16 njengesikhumbuzo kuze kube yilapho benza inguqulo entsha ye-GNU / Linux futhi iza ne-Opera Link).
Futhi uma sisebenzisa imfoloko yeFirefox ngenjini ecwayizayo siyenze ibe yiSoftware yamahhala! kulungile, ngijabule kakhulu nge-xD
Okwamanje, okusondele kakhulu kulokho yiQupzilla, kepha ngiyabona ukuthi umphumela ubulalayo.
Ngisebenzisa i-Iceweasel neFirefox kakhulu kuneChromium / Chrome. Inkinga akuyona i-Google kuphela, kepha esimweni sokufaka i-Chromium / Chrome ku-Debian, ungahle ungaboni amavidiyo we-HTML5 namavidiyo athile weFlash kahle (uma ungazi ukuthi ungazilungiselela kanjani izilungiselelo ukulungisa lawo maphutha).
Kuhle kakhulu, ideskithophu yakho ibiyinhle kakhulu, yize ngiphinde ngazama i-Elementary OS ku-USB Live futhi ngacabanga ukuyifaka ethangeni lami njengoba ingangikholisanga yize ibukeka iyinhle kakhulu i-hehehehe, ngokwakha ngifaka kangcono i-Pear OS futhi uma mayelana nokulungiswa kwezicelo nokunye ukugwema lezi zinyathelo kangcono ngifaka i-Linux Mint.
Okuthile engingakuthandi nge-Pear OS ne-L-Mint ukuthi bane-Adobe Flash Player efakiwe
Nginenkinga yokufaka i-Elementar OS. Isikrini sibukeka njenge "pixelated" angikwazi ukusichaza kahle, kunemivimbo emhlophe esikrinini sonke. I-OS isebenza kahle futhi ilungile, ukuphela kwenkinga enginayo ukuthi. Noma yikuphi ukusikisela?
ULuis Siller kusho
Sawubona mngani ngiyabonga ngokuthunyelwe, hheyi ngifuna ukukubuza ukuthi kungani uma ngifaka i-OS anginayo i-wifi, uyabona, umshayeli wami nguRalink RT3290 802.11bgn Wi-Fi Adapter, angiyona i-newbie ku-linux, ngine bengiyisebenzisa iminyaka futhi lokhu kusatshalaliswa kubonakala kimi Kuhle kakhulu, bengizokucela ukuthi ungisize ngixazulule inkinga yami, ngiyabonga kakhulu kusengaphambili. Ngendlela, ukulanda ne-usb kulungile, akuyona inkinga nge-iso, ngoba kwenye ikhompyutha ngiyisebenzise ngaphandle kwezinkinga, ngaze ngazama ama-bits angama-32 no-64.
Phendula uLuis Siller
Uzamile ukufaka i-kernel entsha exhunywe ku-ethernet?
amakhosombe we-playdeb ne-getdeb awasazinzile. Leyo phrojekthi iyeke ukubuyekeza isikhashana manje ibangela izinkinga. ungayifaki
Sawubona, ngithande kakhulu i-ElementaryOS, kepha nginezinkinga ezimbili; Eyodwa, angikwazi ukuhambisa amawindi ngokuchofoza u-alt + (bengikujwayele kakhulu lokhu), futhi okubili, kungani ngikwazi ukubeka izithonjana namafolda kudeskithophu? futhi ngikwenza kanjani?
faka i-elemenatryosluna futhi lapho ngiqala kabusha ngakusasa ekuseni ngithole umyalezo.
i-elementaryosluna desingblacksystem-system-product-Igama tty
i-elementaryosluna desingblacksystem-system-product-Name login:
ngeke ngivumele ngifinyelele ohlelweni
ungangenzela umusa omkhulu wokusiza i-plesse.
Kungokokuqala ngqa ukuthi ngifake okuyisisekelo futhi kwangidonsela amehlo ukuthi lapho ngichofoza inkinobho yegundane yangakwesokudla ayenzi lutho, ejwayelekile ekunika izinketho zokwakha ifayili elisha, umkhombandlela njll
ngabe lokhu kujwayelekile kumabanga aphansi?
Yini engingayenza ukuyinika leyo misebenzi engingayazi ngawe kodwa ngizizwa ngixakile kufana nokumosha inkinobho hehe
Ngaphambi kwesikhathi ngiyabonga kakhulu.
Nami ngisaqala ukufika kulolu daba, futhi njengawo wonke umuntu ngithanda ukuzibandakanya nokufunda.
Lokhu kukhathazeka kwakho nami bekungokwami, njengoba kuzizwe ngokwazo akunakwenzeka ukunika amandla ideskithophu, okungenani ngifinyelele kuleso siphetho ngemuva kwezinsuku ngifuna okuthile. Ngithole indlela esebenzayo lapha. http://www.hongkiat.com/blog/elementary-os-luna-tips/
Akuyona enye into futhi akukho okungaphansi kokusebenzisa i-Nautilus ndawonye ukuze iphathe ideskithophu. Iyasebenza futhi ungabeka itimu yokuqala, noma ngabe ayibukeki ifana ngokuphelele.
Uma wazi okuthile okungcono, phawula ngakho. I-distro yinhle futhi kuyihlazo ukuthi ilahlekelwe ngakulolo hlangothi.
Ngiyabonga ngempendulo, ngenxa yezizathu zehadiwe zethanga lami kufanele ngisuse futhi ngifake i-xubuntu kepha ngicabanga kakhulu ngokuthola i-pc enikezelwe ku-eOS, futhi imininingwane yakho izongisiza kakhulu 😀
Ngabe othile angangincoma uhlobo lomkhiqizo, imodeli ephathekayo ehambisana ngempela ne-eOS, kuwebhusayithi esemthethweni abayibonisa iLuna nge-lenovo, ucabanga ukuthi ukhona omunye umkhiqizo ohambisanayo, ngaphandle kokuhluleka kwevidiyo, uketshezi, ukusebenza uqobo?
I-lenovo ngokuvamile iphezulu ngentengo, futhi uma kukhona omunye umkhiqizo olingana noma ongcono ngama-eO engingathanda ukwazi.
Ngine-Hp g42 amd dual core kepha indala ngenxa yokusebenzisa futhi iyashisa kakhulu, ngaphandle kokuthi ibinamaphutha lapho isebenzisa ama-hotcorners e-eOS, izithonjana zewindi bezingafiphele. Kungakho ngizothenga entsha.
Ngiyabonga kusengaphambili 😀
Mngani sengivele ngafaka i-elementary os luna kepha inkinga ukuthi ihamba kancane kakhulu. Kubukeka kumangaza kakhulu kimi ukuthi ngingaqinisekisa kanjani ukuthi angilahlekelwa yilutho.Ngokokuqala ngifaka i-linux.
Sanibonani bantu! Ngisanda kufaka i-EOS encwadini yami futhi nginenkinga, ngine-Samsung TV exhunywe yi-hdmi futhi iyayibona kodwa i-TV ingikhombisa umyalezo othi "ayitholi siginali", ngabe kwenzeka komunye umuntu?
Sawubona, namuhla ngisanda kufaka i-Elementary OS futhi nginombuzo olandelayo:
Ngisebenzisa ama-monitors amabili (i-HDMI ne-VGA) inkinga ukuthi ngemuva kokubeka i-password yami nokucindezela u-enter, esinye sezikrini siphenduke saba mnyama kwathi esinye saba mhlophe….
Ngisebenzisa ikhadi le-ASUS RADEON HD 6570.
Ngiyethemba ungangisiza, Ngiyabonga.
UFederico Pereyra kusho
Angikwazi ukudlala i-mp3, ngilandele okushilo futhi yangiphonsa umyalezo «isixhumi se-GStreamer esidingekayo asifakiwe», noma kunjalo uhlelo luyabuyekezwa manje, kepha uma kwenzeka kungenye into, ngikushiya umbuzo , ulwazi luhle kakhulu, ngiyabonga kakhulu.
Phendula uFederico Pereyra
Ngisanda kufaka i-ELEMENATARY OS nawo wonke amaphakheji owancomayo. Njengoba ngintsha ku-linux, ngiyakubuza.
Ngingazifaka kanjani izinhlelo zokusebenza, amafolda, amafayela, njll .. kudeskithophu. Ivele ingishiye ethekwini.
futhi ngemuva kokushaya okungaka ushaye i-gallarda yangomhla weshumi nanhlanu njengomvuzo wokuhamba okungaka
Ungayixazulula kanjani inkinga yokuthi i-OS ekwi-laptop yami ye-HP ayitholi ikhadi lenethiwekhi le-WIFI, libonakala linqamukile. Ngabe iyiphi i-codec ongayifaka? Ngiyabonga
UFederico Gustavoo Pereyra kusho
Isixazululo esingaba khona kungaba ukuxhuma i-pc ku-inthanethi nge-Ethernet bese uyinika isibuyekezo sabashayeli, ngakho-ke labo abasebhodi ye-wifi bazofakwa ngokuzenzakalela, zama lokho futhi uma kungasebenzi singathola esinye isixazululo, kepha lokhu kuzoba okulula kakhulu. Jabulela
Phendula uFederico Gustavoo Pereyra
I-Adalid Ortiz kusho
Nginenkinga efanayo njalo lapho ngibuyekeza i-eOS. Ngikuxazulule ngokulingene ukufaka / ukufaka i-adapter ye-wi-fi nge-usb ... bese kokuncamelayo kohlelo ngibheka isithonjana sabashayeli abengeziwe bese ngiyasivumela ukuthi sibabone bese ngemuva kwalokho kusebenze. Ngalokhu, ukuxhumana kwe-inthanethi kuyadingeka njengoba ngingenayo i-ethernet yingakho ngisebenzisa i-adaptha yangaphandle. Ngemuva kwalokho ngiyakwazi ukuxhuma, yize kwesinye isikhathi ngiba nezinkinga zokuxhuma. Ikhadi lami nguBroadcom. I-eOS uhlelo oluhle. Ngaphambi kokuthi ngisebenzise iPear OS x futhi ngabona ukuthi ibinezinkinga eziningi ngakho-ke yize ngingeyena uchwepheshe ngithanda ukuzama ukuxazulula izinto ngaphandle kokusebenzisa i-terminal. Ngisebenzisa i-netbook lami njengeseva ye-inthanethi ukuhlola ezinye izinhlelo zomthombo ovulekile (http://clavius.tij.uia.mx) futhi ngifake cishe konke ukunambitheka kwe-Ubuntu ne-eOS engingakuthandi kepha manje sengikhululeke kakhulu ngale distro.
Phendula ku-Adalid Ortiz
Sawubona, ngiyabonga kakhulu ngomnikelo wakho, ngithathe isinqumo sokushiya iWindows okwesikhashana (ngiyathemba impela) futhi ngakhetha i-Elementary njengowukuphela kohlelo. Kuze kube manje yonke into isebenza kahle ngaphandle kokuthi ukuxhumana kwami ​​kwe-wifi kuhlala kunqanyuliwe futhi kuyacasula kakhulu. Ngisize ngilungise lokhu ngicela. Okokuqala, Ngiyabonga.!
Ngine-laptop ye-Acer V5. I-Intel Core i3.
Umbuzo, ngibafaka kanjani abashayeli be-wifi antenna? Angikwazi ukuxhuma ku-inthanethi
Sawubona, bengizama ukufaka amawindi afana ne-jelly futhi angikwazi ukuthola izilungiselelo zomsebenzisi kwimodi ye-xfce, uthi iya ekucushweni kodwa angikuboni ndawo, ngifika kanjani kulelo windi?
HI, okuthunyelwe okuhle, kepha nginezinkinga ngamawindi afana ne-jelly. Kuvela ukuthi angiyitholi imenyu i-Session ne-starup ngoba angazi ukuthi ungaya kuphi lapho uya ekucushweni, ungangisiza?
Sawubona, amaphuzu ambalwa, ama-elementary-tweaks angitshela ukuthi awekho lapho, noma ngeke angivumele ngiyifake. Kukhona futhi nombuzo wokuthi ungayithola kanjani iSession nomsebenzisi. Ngoba ukumiswa okujwayelekile kungangisebenzeli, ngabe kufanele ngenze noma ngifake okuthile?
ngisize, ngifuna ukubeka amafasitela e-jelly
Hhayi-ke, ngiyabonga ngokuthumela, kepha ngimusha kakhulu ebangeni lokuqala futhi angazi okuningi nge-linux.
Ngiyithandile le OS, ngiyabonga ngalokhu okufakwayo. Noma nini lapho into isiqedile ukufaka kuhle ukuba nezincomo zochwepheshe. Ozithobayo!
ULuis Villalobos kusho
Sawubona, ngingathanda ukuqhubeka ngisebenzisa i-Elementary OS, inqobo nje uma ngingafaka izinhlelo zokusebenza ngaphandle kokuxhumeka kwe-inthanethi, ngabe othile angangitshela ukuthi ngingawenza kanjani lo msebenzi?
Phendula uLuis Villalobos
IFirefox OS 1.1: ngokuningiliziwe nangesikhathi esizayo
Ungayifaka kanjani Ubuntu 13.10 Saucy Salamander igxathu negxathu